Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Airways yoMzantsi Afrika ibuyela esibhakabhakeni nge-23 kaSeptemba
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 25, 2021
Inqwelo moya yoMzantsi Afrika njengenqanaba lokuqala iza kuqhuba iinqwelomoya ukusuka eRhawutini ukuya eKapa, ​​eAccra, eKinshasa, eHarare, eLusaka naseMaputo.
I-Airways yoMzantsi Afrika iqale ukusebenza ngoSeptemba 2021.
I-SAA iya kuqhubeka nokuba ngumthuthi okhuselekileyo kwaye ihambelane neeprotokholi ze-COVID-19.
I-SAA iqala ngokutsha ngemeko ezoyikekayo zeshishini.
Ukulinda kugqityiwe. Kwisithuba nje esingaphantsi kwenyanga, uqhankqalazo kunye nokuqhelana kwe-Airways yoMzantsi Afrika (SAA) kuya kuphinda kubonakale esibhakabhakeni njengoko inqwelo moya iqala ukusebenza. Umntu ophetheyo uqinisekisile ukuba iinqwelomoya zokuqala ziya kuqala ngoLwesine, nge-23 Septemba 2021. Amatikiti aza kuqala ukuthengiswa ngoLwesine, umhla we-26 Agasti 2021. Ukubhukisha iVoyager kunye neRhafu yokuThenga ngeVocher ziya kufumaneka ngoMvulo we-6 Septemba 2021.
Ingqonyela yexeshana ye-Airways yoMzantsi Afrika uThomas Kgokol
Ingqonyela yethutyana uThomas Kgokolo uthi, “Emva kweenyanga sisebenza ngokuzimisela, kuyasivuyisa ukuba iSAA iyaqala ukusebenza kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abakhweli bethu abathembekileyo nokubhabha iflegi yoMzantsi Afrika. Siyaqhubeka nokuba ngabaphethe ngokukhuselekileyo kwaye sinamathela kwiinkqubo ze-COVID-19. ”
YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika Isigaba sokuqala siza kuqhuba iinqwelomoya ukusuka eRhawutini ukuya eKapa, ​​eAccra, eKinshasa, eHarare, eLusaka naseMaputo. Iindawo zokufikela ezingakumbi ziya kongezwa kuthungelwano lwendlela njengoko iqinisa ukusebenza ukuphendula iimeko zentengiso.
UKgokolo wongeze ngelithi, "kukho uvakalelo olunzulu ngaphakathi kwiQela le-SAA njengoko silungiselela ukusuka, ngenjongo enye - ukwakha ngokutsha nokugcina inqwelo-moya enenzuzo ephinde yathatha indima yobunkokeli phakathi kweenqwelomoya zalapha ekhaya, zelizwekazi kunye nezamazwe aphesheya."
Ucacisile uKgokolo, “Icandelo lezokuhamba ngenqwelomoya ngoku lihamba ixesha lovavanyo, kwaye siyayazi imiceli mngeni enzima ezayo kwiiveki ezizayo. Siyawubulela uMzantsi Afrika ngenkxaso esiyifumeneyo ekusifikiseni kule ndawo sikuyo namhlanje. Njengokuba sikulungele nje ukusuka, oku sikubona njengeyona nyathelo libalulekileyo leSAA kunye ne
Ngokuka sihlalo weBhodi yeSAA, uJohn Lamola, ukusukela oko umphathi wenqwelomoya aphuma kuhlangulo lweshishini ekupheleni kuka-Epreli 2021, iSebe lamaShishini kaRhulumente kunye neBhodi kunye neqela labaphathi babanjiwe becwangcisa ukumiliselwa kwakhona uhlengahlengiso kwaye ulungele injongo
Iinqwelo-moya ezinokuthi abantu baseMzantsi Afrika baphinde bazingce ngazo. "I-airline iqala kwakhona ngetyala elinzima leshishini", utshilo uLamola.
Cuthbert Ncube, usihlalo we IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB), uthe akufumana iindaba, ukuba IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika Kuluvuyo ukubona iSouth African Airways iqala ukusebenza kwakhona ibuyela esibhakabhakeni. Ukubuya komdlali ophambili wengingqi nakwamanye amazwe njenge YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika kushishino lubalulekile kushishino lwezokhenketho kumazantsi eAfrika ukuqala nokuqalisa kwakhona ukubuyela kuwo wonke umonakalo owenziwe ngubhubhane we-COVID-19 wehlabathi.